May 2021 - Amawpyay
နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သတ်လို့လုံးဝအာမခံတဲ့ဆေးနည်း နှ လုံး သွေး ကြောကျဉ်း ရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံး ဝ အာမ ခံပါ တယ် ဆို တဲ့ ဆေး နှ လုံးသွေးကြောကျဉ်းတယ်ဆိုတာက နှလုံးမှာရှိ တဲ့ သွေး လွှတ်ကြောနှင့်သွေး ပြန်ကြော တွေ အ တွင်းမှာ စား ထား သ မျှ အ ဆီ အ နှစ်တွေ ဟာ သွေး လမ်းတစ်လျှောက် ပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ့ ကြောင့် နှ လုံး သွေးကြော တွေ …
ရင်ထဲမှာ တကယ်ချစ်ပေမယ့် ချစ်မပြတတ်တဲ့ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအကြောင်း
ရင်ထဲမှာ တကယ်ချစ်ပေမယ့် ချစ်မပြတတ်တဲ့ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအကြောင်း စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ် သက် တဲ့ အင်္ဂါသား၊သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင် တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်မယ့် သူတွေ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင် စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှ ကိုဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော် ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့ မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အထီးကျန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေ တတ်ပါ တယ် ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကို စကား လုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင် …
အချစ်နဲ့ မကင်းတဲ့ လူတိုင်းအတွက် သိမှတ်ရန်အချက်များ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာ၊ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့  ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ ဆိုတာတွေ ကတော့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး အချစ်နဲ့ ပတ်သက် လာရင် ခံစားကြရတာ အတူတူ ပဲဖြစ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့ မကင်းတဲ့ လူတိုင်း အတွက် အချစ်အကြောင်း သိမှတ်စရာတွေကို ဝေမျှပေးလိုက် ပါတယ်။ ၁။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှ မိမိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကို သိတယ်။ ၂။ မှတ်သားသင့်တာကိုမှတ်သားပြီး မေ့သင့်တာကိုမေ့ရမယ်။ ပြောင်းလဲနိုင်တာကို ပြောင်းလဲပြီး မပြောင်းလဲနိုင်တာကို သင်လက်ခံနိုင်ရမယ်။ ၃။ မျက်ရည်စက်တွေဟာ ၀မ်းနည်းမှုကို မှတ်မှတ်ရရဖြစ်စေတယ်။ ၄။သူ့အတွက်နဲ့မျက်ရည်မကျသင့်ဘူး …
`စိတ်​ညစ်​​တိုင်း ဖတ်​ပါ´´ မချစ်​ပါနဲ့…မချစ်​သင့်​တဲ့ လူကို မချစ်​ပါနဲ့။ မ​မေ့ပါနဲ့​မေ့ပစ်​သင့်​တဲ့ လူ​တွေက်ို မေ့ပစ်​နိုင်​ဖို့။ လွမ်းပါနဲ့ မလွမ်းသင့်​တဲ့ လူကို ဘယ်​​တော့မှ မလွမ်းနဲ့။ လူ​တိုင်းက ကိုယ့်​စိတ်​နဲ့ နှိုင်းပြီး ဘယ်​​တော့မှ မယုံကြည်​နဲ့ လူတိုင်းက ကိုယ့်​စိတ်​လို့ မဟုတ်​ကြဘူး။ ပြင်​လိုက်​ပါ အားငယ်​တတ်​တဲ့ အကျင့်​ကိုပြင်​။ လူတိုင်းကို ယုံလွယ်​တဲ့ အကျင့်​ကိုပြင်​။ သင့်​ကိုသင်​ မယုံကြည်​တဲ့ အကျင့်​ကိုပြင်​။ ​တွေးပြီး ၀မ်းနည်းတတ်​တဲ့ အကျင့်​ကိုပြင်​။ စိုးရိမ်​စိတ်​များတဲ့ အကျင့်​ကိုပြင်​ပါ။ သင်​က အားငယ်​တတ်​ရင်​ လူ​တွေက ချနင်းတယ်​ ~တကိုယ်​​ကောင်း ဆန်​သင့်​တဲ့​နေရာမှာ ဆန်​ပါ။ ~မာနကြီးရမယ့်​ ​နေရာ မာနကြီးပါ။ ~အတ္တကြီးသင့်​တဲ့​နေရာ အတ္တကြီးပစ်​ပါ။ အားငယ်​ပြီး စိတ်​ညစ်​​နေတတ်​ရင်​..လူတိုင်းက လိမ်​ညာ …
ယောက်ျား တစ်ယောက်က အရမ်းချစ် ပြတတ်ဖို့ မလိုဘူး တာဝန် သိတတ်ဖို့ ပဲလိုတယ်
ယောက်ျား တစ်ယောက် က အရမ်းချစ် ပြတတ်ဖို့ မလိုဘူး တာဝန် သိတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ် ယော က်ျား တစ် ယောက် က အ ရမ်း ချစ် ပြ တတ် ဖို့ မ လို ဘူး တာ ဝန် သိ တတ် ဖို့ပဲ လို တယ်… တာ ဝန် သိ တတ် မှ တာ ဝန် ယူ တတ် တာ ကိုယ် နဲ့ တွဲ နေတယ် လို့ ပတ် ဝန်း ကျင် က အ …
ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုး၍ ဝင်ငွေတိုးစေသော ယတြာ
ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုး၍ ဝင်ငွေတိုးစေသော ယတြာ လင်ဗန်း တစ်ချပ် (အဝိုင်း ဖြစ်ရမည်။ မည်သည့် လင်ဗန်း မဆို ရပါ သည်။ စတီ လင်ဗန်း ကြေးလင်ဗန်းကို ပိုသုံးစေ ချင်ပါ သည်။) သရက်အရွက် ၉ ရွက် (အပေါက် အပြဲ အနာ အဆာ မပါစေရ ။ အနာအဆာ ကင်းတာ ကို သုံးပါ။ သရက်ရွက်သည် ကျက်သရေ တိုးစေ သည်။ မဂ်လာ ရှိစေ သည်။) ဆီမီးခွက် (မြေခွက် ကြေးခွက် စတီးခွက် ကြိုက်ရာ သုံးပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ ကြေးခွက်ကို သုံးပါသည်။ အိန္ဒိယ ပစ္စည်းရောင်း …
နဲနဲလေးအေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်နေတဲ့ ခါးနာဝေဒနာကို အလွယ်တစ်ကူပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
နဲနဲလေးအေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်နေတဲ့ ခါးနာဝေဒနာကို အလွယ်တစ်ကူပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေ ရပါ သလား..? နဲနဲလေးအအေးခံ လိုက်တာနဲ့ အရိုးအဆစ်မြစ်တွေ တစ်ဆစ်ဆစ် ကိုက်ခဲတာ မျိုးတွေ ဖြစ်နေပါ သလား..? အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေ အားလုံး ယူပစ်သလို ကင်းစင်သွားပါ လိမ့်မယ်။ ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်တတ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြရင် ဆရာဝန်တွေ အားလုံးက ဒီပြဿနာဟာ အနေအထိုင် ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်ကန်လို့ ဖြစ်တာ၊ ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုထိုင် စသည်ဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ သက်သာစေမယ့် ဆေးတွေပေးကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဆေးတွေက ခဏတော့ သက်သာစေ မှာပါ။ ရေရှည်မှာ ဒီလိုဝေဒနာတွေ ကင်းရှင်းသွားဖို့ အတွက် …
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်းကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေးရွတ်ကြည့်ပါလား တစ်နေ့ ( ၇ ) ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ထူးခြားပါလိမ့်မယ် လွယ်ကူ ထိရောက် အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေးကို ရွတ်ကြည့် လိုက်ပါ တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားအစွမ်း ထက်မြတ်သော သိကြားမင်း ဂါထာတော် ” ဝေဒါသာကု၊ ကုသာဒါဝေ ဒါယသာတ၊ တသာယဒါ၊ သာသာဓိကု၊ ကုဓိသာသာ ကုတကုဘု၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည်၊ ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့၊ သာ = လျင်စွာ၊ ကု = ပြေးကုန်သတည်း။ ကု = …
ကျန်းမာရေးအတွက် မထင်ထားလောက်အောင်ကို ထိရောက်နေတဲ့ အာတာလွတ်ဥ
ကျန်းမာရေးအတွက် မထင်ထားလောက်အောင်ကို ထိရောက်နေတဲ့ အာတာလွတ်ဥ မကြာခဏစား ဖြစ်တယ် တန်ဆေးပဲ ဘယ်ဟာနေနေ အထိုက်အသင့် စားရမယ် ယူဆ ပါတယ်မြေအောက်ဥ တေကို အာတာလွတ်ဥဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင် ဈေးလည်း သက်သာပြီး လူကြိုက်များတဲ့ သွားရေစာဖြစ် ပါတယ် ။ ကလေးလူကြီး မရွေး စားသုံးနိုင်တဲ့ အာတာလွတ်ဥ ဟာဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိပါ တယ်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး မကြာခဏစားဖြစ်အောင် စားလိုက်ပါ (၁) နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေတယ် အာတာလွတ်ဥဟာ မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင် ပါတယ်။ အိပ်မပျော်တာ၊ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်တာတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင် ပါတယ်။ (၂) သွေးအားကို …